Jabhadaha Suuriya oo Manbij ka qabsaday Dawladda Islaamka - BBC News Somali
Jabhadaha Suuriya oo Manbij ka qabsaday Dawladda Islaamka
Image caption Bishii July markii sawirkan la qaaday xulafada uu Maraykanku taageero waxay haysteen qayb ka mid ah Manbij
Xulafo uu Maraykanku taageero oo dagaalyahanno Kurdi iyo Carab ah ayaa qabsaday inta badan magaalo muhiim ah oo ku taalla Suuriya waxayna ka qabsadeen kooxda isku magacawday Dawladda Islaamka, sidaas waxaa sheegay qolyaha xuquuqda aadanaha u ol'oleeya iyo abaan duuleyaal dagaal.
Manbij waxay ku taalaa wadooyinka isku xira koonfurta xadka Turkiga.
Waxaa maamulaysay Dawladda Islaamka mudo labo sano ka badan.
Tiro yar oo dagaalyahanada kooxdaasi ah ayaase wali dagaalamaysa iyaga oo dadka gabaad ka dhiganaya sida ay xulafadu sheegtay.
Ciidammada xoogaga dimuqraadiga ee Suuriya ee loo soo gaabiyo SDF oo ah xulafo taageero ka hela Maraykanka oo ay ka mid yihiin malayshiyada Kurdiyiinta ah ee YBG oo awood badan leh ayaa labo bilood ka hor bilaabay dagaalka ay dib ugu qabsanayaan magaaladaas.
Diyaaradaha dagaalka ee xulafada ay Maraykanku hogaaminayeen ayay taageero ka heleen kuwaas oo duqeeyay fadhiisimaha Dawladda Islaamka.
Kaddib dagaallo culus, Manbij ayaa la hareereeyay si dhamaystiran ayaana loo go'doomiyay bishii June.
Waxaa lagu soo waramayaa in duqaymaha diyaaradaha xulafada uu Maraykanku hogaaminayo in ay ku dhinteen tiro shacab ah oo ay ku jiraan 11 caruur ah bishii July, dadkaas oo markaas u cararayay tuulo magaalada u dhaw.